Kedu ihe ụmụaka mere - Wendy Francis | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Kedu ihe umuaka umuaka - Wendy Francis
Boysmụaka nwoke toro ma bụrụ nwoke. Girlsmụ agbọghọ agaghị eme otú ahụ. Nke ahụ bụ ihe na-eme ụmụntakịrị nwoke pụrụ iche? Ọ dị mma, nke ahụ na ọtụtụ ebumnuche ndị ọzọ. You nwere ike icheta ụfọdụ?
E Nweta site na Koorong Bookshop Pịa -> Ebe a.
Ruo ọtụtụ afọ, mmadụ ikwere ihe ọ pụtara ịbụ nwoke ma ọ bụ nwanyị abụwo nnukwu nsogbu nye ọtụtụ ndị na-eto eto ka ha na-anwa ime ihe banyere onwe ha. Ana m anabata akwụkwọ ndị a dị ka ezigbo ụzọ iji nyere ụmụ anyị aka ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ na mmekọahụ ha na-enwe ma nweere onwe ha ịbụ onye ọ bụla ha chọrọ ịbụ. - Dr Megan Best, Dibia na Bioethicist, Mahadum Notre Dame
Wendy na-ekwupụta eziokwu ndị dị ike n'ụzọ dị mfe. Nwa ọ bụla kwesiri ka agwa ya na ọ dị mma, na ndụ na-enye ọyoụ, na ọdịnihu nwere olile anya, na ha nwere ihe bara uru iji tụnye na ọdịnihu ahụ. Ozi ndị a dị mfe bụ ntọala ma ga-agọzi ma ndị toro eto na-agụ ma nwatakịrị ọ bụla nụrụ ozi ndị a dị mkpa nke ịhụnanya. - Dr Elisabeth Taylor, Director nke Research, Australian Christian n'ọnụ ụlọ ogologo